कहिले आउँछन् धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टर ?::Online News Portal from State No. 4
कहिले आउँछन् धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टर ?
दर्जनौंको दरबन्दी एक जनाको भर
बागलुङ, ८ असोज – धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा १३ बिशेषज्ञसहित २३ जना डाक्टरको दरबन्दीछ । तर यतिबेला दुइ जना मात्र बिज्ञ छन् । केही मेडिकल अधिकृत छन् । अनि ११ औं तहमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सागरकुमार राजभण्डारी छन् । बिज्ञ नभएपनि डा. राजभण्डारीलाई सबै प्रकारको बिज्ञ बन्न बाध्यता छ । त्यसमा पनि दैनिक आउने प्रसुती सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बाध्यता बढी छ । अपरेशन गर्नका लागि आउने बिरामीलाई उनले गराएका छन् । उल्टो बच्चा भएर आएका बिरामीदेखि तत्काल अपरेशन नगरे ज्यानकै खतरा हुनेहरुलाई राजभण्डारीले अपरेशन गराएका छन् ।
अहिले अस्पतालमा दुईदेखि चार जना सम्मको अपरेशन भैरहेको छ । त्यसमा राजभण्डारीकै योगदान छ । गत साता पर्वतको शालिजाकी गौमाया पुनलाई लामो व्यथा लाग्दा पनि बच्चा निस्कन नसकेपछि अपरेशन गरेर बच्चा निकालियो । डा. राजभण्डारीले उक्त सफल अपरेशन गराएका थिए । यसरी सफल अपरेशन गराएपनि उनी स्त्रिरोग बिशेषज्ञ होइनन् । प्रमुख कन्सल्ट्यान्टको रुपमा मेसु भएका राजभण्डारीले त्यतिले मात्र सुख नपाएर रेडियोलोजिस्ट, बालरोग, फिजिसियन र हाडजोर्नी, नाक कान घाँटीको पनि काम गर्दै आएका छन् । मागेको दरबन्दी नपाएपछि राजभण्डारी आँफै कस्सिएर काम गर्न बाध्य भएको सुनाउँछन् । ‘मेरो काम होइन भनेर पनि सुख पाएको छैन’ राजभण्डारीले भने, ‘साह्रै समस्यामा परेर आएका बिरामीलाई सक्दीन भनेर पठायो भने ज्यानकै खतरा हुन्छ, के गरौं, काम गरिरहेकै छु ।’ बागलुङ पोखरा राजमार्ग निर्माणाधिन भएकोले ५ घण्टा सम्म लाग्ने गरेको छ । तत्काल अपरेशन नगरे आमा र शिशुको ज्यान खतरामा पर्ने अबस्था देखेपछि आफ्नो क्षेत्र नभएपनि उनले अपरेशन गराएको बताए ।
अस्पतालमा एनेस्थेसियोलोजिष्ट पनि छैनन् । एसिस्टेन्ट तहका सारोज केसीले बेहोस पार्ने काम गरिरहेका छन् । ‘काम गर्दा गर्दै अनुभवी त भएका छन्, तर डाक्टर छैन’ राजभण्डारीले भने, ‘अस्पतालको सेवाबारे धेरै टिप्पणी शुरु भएपछि सबै काममा एक्लै अगाडि सरेको उनले बताए । डा. राजभण्डारी अहिले चौबिसै घण्टा अस्पतालमै खटिएका छन् । उनले पटक पटक मन्त्रालयमा दरबन्दी अनुसारका डाक्टर र बिशेषज्ञ माग गरेको बताए । ‘पटक पटक माग गरेको छु, काठमाण्डौ गएर बसौं भने आएका बिरामीको पनि बेहाल हुन्छ’ उनले भने । केही समयदेखि अस्पताल विकास समिति पनि खारेज भएको छ । नयाँ समिति बनेको छैन । व्यवस्थापकीय कामका लागि चिकित्सकहरुकै टोलीले सामाजिक अगुवाको सल्लाहमा काम गरिरहेका छन् । अस्पतालमा रेडियोलोजिष्ट र नाक कान घाँटीको मात्र विज्ञ आएका छन् ।
बाल रोग, स्त्रिरोग र एनेस्थेसियोलोजिष्ट आएका छैनन् । प्रसुती बिभागमा काम गर्दै आएकी डा. अस्मिता पाठक समेत आूफै सुत्केरी बिदामा छिन् । उनी समेत नभएपछि सबै काममा राजभण्डारीले जिम्मा लिएका हुन् । ‘प्रमुख कन्सल्ट्यान्ट भैसकेकोले अधिकांस तालिम अपरेशनकै गर्नु भएको छ, त्यसैले उहाँ पनि बिशेषज्ञ जस्तै हो’ अस्पतालका सूचना अधिकारी रामप्रसाद खनालले भने, ‘अन्य बिज्ञ नहुँदा राजभण्डारीबाट कुनैपनि काम रोकिएको छैन ।’ अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका बिज्ञ नआउनु, भवन अलपत्र पर्नु र भएका उपकरण समेत जडान गर्न नपाएकोले समस्या भएको उनले बताए । अस्पतालमा सात बर्षदेखि निर्माणाधिन भवनहरु अझै पुरा भएका छैनन् । तीनवटा भवनमध्ये २०६९ सालमा सकिएको पहिलो भवनबाहेक दुइवटा नबन्दा प्रशासन छाप्रोमा संचालन भएको छ । ओपिडी, इमरजेन्सीदेखि सबै प्रकारका सेवा एकै ठाउँमा दिनुपर्छ । गगन थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालय छाडेको तीन दिनपछि स्त्रिरो बिशेषज्ञ डा. सुनिलमणी पोखरेल एनेस्थेसिया डा. सुरेन्द्र कुँवर लगायतले अस्पताल छाडेपछि अहिले सम्म अरु नआएका हुन् ।